ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Chengdu Silike Technology Co.,Ltd.
Chengdu Silike Technology Co., Ltd. ကို 2004 ခုနှစ်တွင် တရားဝင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး NO.336၊ CHUANGXIN AVE၊ QINGBAIJIANG INDUSTRIAL၊ CHENGDU၊ CHINA၊ ကွမ်တုံ၊ Jiangsu၊ Fujian နှင့် အခြားပြည်နယ်များရှိ ရုံးခန်းများ။လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီသည် စက်ရုံဧရိယာ 20000 m2 ကျော်ရှိပြီး သီးခြားဓာတ်ခွဲခန်းဧရိယာ 3000m2 ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် 8000 တန် ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရော်ဘာ-ပလပ်စတစ်နယ်ပယ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဆီလီကွန်ကို ဆန်းသစ်တီထွင်သူနှင့် ဦးဆောင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် Silike သည် ဆီလီကွန်နှင့် ပလတ်စတစ်များ ပေါင်းစပ်မှုကို နှစ် 20 ကျော်ကြာ အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး ဆီလီကွန်နှင့် ပလတ်စတစ်တို့ကို ပေါင်းစပ်ကာ ဦးဆောင်ကာ ဘက်စုံသုံး ဘက်စုံသုံး တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဖိနပ်များ၊ ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် ကေဘယ်လ်များ၊ မော်တော်ကားအတွင်းပိုင်းဖြတ်တောက်မှုများ၊ ကြေးနန်းပိုက်များ၊ ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်များ.... အစရှိသည်တို့တွင် စီလီကွန်ထည့်ဆေးများ ထည့်သွင်းထားသည်။2020 ခုနှစ်တွင် Silike သည် ဆီလီကွန်-ပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ်မှုအတွက် ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာတီထွင်နိုင်ခဲ့သည်- Si-TPV silicon-based thermoplastic elastomers သည် ဆီလီကွန်-ပလပ်စတစ်ချည်နှောင်ခြင်းနယ်ပယ်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ နက်ရှိုင်းစွာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနပြုပြီးနောက်၊
ထုတ်ကုန် R&D ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှစ်အတန်ကြာပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ပြည်တွင်းစျေးကွက်ဝေစု 40% ကျော်ကို အမေရိက၊ ဥရောပ၊ Oceania၊ အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် အခြားနိုင်ငံတကာအရောင်းဈေးကွက်၏ အခြားဒေသများကို လွှမ်းခြုံတည်ထောင်ကာ ထုတ်ကုန်များကို နိုင်ငံအများအပြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချကြသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ဖောက်သည်များထံမှ တညီတညွတ်တည်း ချီးမွမ်းခြင်းကို ရရှိခဲ့သည်။ထို့အပြင်၊ Silike သည် Sichuan တက္ကသိုလ်၊ National Synthetic Resin Center နှင့် အခြားသော R&D ယူနစ်များအပါအဝင် ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်များ၊ သုတေသနအင်စတီကျုများနှင့် အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား ပိုမိုအဆင့်မြင့်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။
အော်ဂဲနစ်-ဆီလီကွန်ကို ဆန်းသစ်တီထွင်ပြီး တန်ဖိုးအသစ်ကို မြှင့်တင်ပါ။
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အထူးဆီလီကွန်အသိဉာဏ်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကြိုးပမ်းသူများအတွက် Enterprise ပလပ်ဖောင်းဖြစ်လာပါ။
2. အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ထိရောက်မှုရှိသည်။